बच्चालाई काँचो दूध पिलाउनु फाइदा कि बेफाइदा ?
कार्तिक १०, २०७८ ०७:०४ मा प्रकाशित
कच्चा दूधले कमजोर प्रतिरोधक क्षमता भएका बालबालिकालाई नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ । बच्चालाई काँचो दूध मन पर्ने भएपनि यसका फाइदा-बेफाइदा दुj} छन् ।
काँचो दूध पाश्चरयुक्त वा उमालिएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा दूधमा रहेका हानिकारक कीटाणु मरेका हुँदैनन् । पाश्चरिङ दूधलाई किटाणुमुक्त र बच्चालाई स्वस्थ बनाउनका लागि उत्तम मानिन्छ ।
नउमालेको वा काँचो दूधले बच्चामा अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले बच्चालाई यस किसिमको दूध दिनबाट रोक्नु पर्छ । किनकी यो उनीहरुको स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुन सक्छ ।
काँचो दूध भनेको के हो ?
बिना पाश्चरिङ गरिएको दूध नै कच्चा दूध हो । त्यसैले यस किसिमको दूधलाई एक हदसम्मको तापक्रममा उमाल्नु पर्छ । स्टेरलाइजेसन प्रक्रियाले प्रतिरक्षा कारक जस्ता प्रमुख तत्वको समाप्त गरिदिन्छ । जस्तै भिटामिन, मिनरल र प्रोटिन । दूधलाई उमालेर पिउने गरिएको छ।
काँचो दूधको पोषक तत्व
दूधमा रहेको पोषक तत्व नस्ल, प्रजाति, दूध निकाल्ने समय आदिमा निर्भर रहन्छ ।
गाईको दूधमा पोषक तत्व
पानी — ८७.५ प्रतिशित
कोर्बोहाइड्रेड —४.४ ग्राम
चिनी — ५.१ ग्राम
ओमेगा ३ फ्याटि एसिड—०.०८ ग्राम
ओमेगा ६ —०.१२
बच्चालाई काँचो दूध पिलाउनुका फाइदा के ?
चिकित्सकका अनुसार काँचो दूध सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या निको पार्नमा सहयोगी हुन सक्छ । किनकी यसमा विभिन्न किसिमका पोषक तत्व हुनेगर्छ । काँचाे दूधका विषयमा विश्वभरी विभिन्न अनुसन्धान भएका छन् यद्यपी यिनबाट काँचो दूध स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो भन्ने पुष्टि भइसकेकाे छैन ।
काँचो दूध बच्चालाई दिँदा कस्ताे जोखिम ?
बच्चालाई काँचो दूध पिलाउनुको फाइदा छ । तर, यसका जोखिम पनि छन् । किनकी काँचो दूधमा लिस्टेरिया, साल्मोनेला र इकोली जस्ता ब्याकटेरिया रहेका छन् । कमजोर प्रतिरक्षा भएका बच्चाका लागि यो घातक हुनसक्छ, नवभारत टाइम्समा समाचार छ ।